किम जोङ उन र ट्रम्पबीच जेठ २९ गते सिंगापुरमा हुने भेटवार्तामा के कुरा होला ? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
किम जोङ उन र ट्रम्पबीच जेठ २९ गते सिंगापुरमा हुने भेटवार्तामा के कुरा होला ?
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:५२ May 13, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । उत्तरकाेरियाका सर्वाेच्च नेता किम जाेङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पबीच हुने एेतिहासिक वार्ताकाे समय र स्थान तय गरिएकाे छ । अागामी जुन १२ अर्थात जेठ २९ गते ट्रम्प र किमबिच सिंगापुरमा वार्ता हुने भएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनबिच प्रस्तावित वार्ताको तयारी बितेको महिनादेखि गोप्य रुपमा भइरहेको थियो । तर अब दुई नेताबिच हुने भनिएको वार्ताको सयम र स्थान पनि सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ उत्तर कोरिया गएर फर्किए लगतै वार्ताको स्थान र समय सार्वजनिक गरिएको हो ।
आउँदो जुन १२ (जेठ २९ गते) ट्रम्प र किमबिच वार्ता हुने तय भएको हो । यसम्बन्धी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै दिएका हुन् । ट्रम्प र किमबिच अमेरिका वा उत्तर कोरियामा नभइ सिंगापुरमा भेटवार्ता हुने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरेर यो अवसरलाई विश्व शान्तीका लागि विशेष अवसर बनाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गएको मार्चमा ट्रम्पले उत्तर कोरियाले गरेको वार्ता प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।
परमाणु हतियारको स्वीच तेरो भन्दा मेरो ठूलो भन्ने वाक युद्धमा लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डा ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबिच ऐतिहासिक वार्ता हुने भएको हो ।
वार्ताको अन्तिम तयारीका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ बुधबार उत्तर कोरिया गए । एक महिनाअघि गुप्तर विभाग सिआइएको निर्देशकको रुपमा गोप्य भ्रमणमा उत्तर कोरिया पुगेका पोम्पेओ यसपटक औपचारिक रुपमै उत्तर कोरिया पुगेका हुन् र यसपटक उनी विदेश मन्त्रीको हैसियतमा ।
ट्रम्पमाथि इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीको कडा प्रहार
देशको छातीमा मोदीलाई ओलीले हतियारसहित परेड खेलाएको भन्दै नेकपाको आपत्ती